Umqondo Omkhulu - Sikunye
Umqondo OmkhuluIvo Kittel2021-03-09T10:19:43+02:00
Ithuba elibalulekile lokuthuthukiswa kwe-First Thousand Days (FTD) lisematheni. Kuyithuba eliyimvelakancane, kusuka ekukhulelweni kuye eminyakeni emibili, kuyithuba elikhulu empilweni, elinomthelela omkhulu empumelelweni yempilo yomuntu ngamunye.
Lesi sikhathi siyithuba elihle nobungozi obukhulu. Ngaphezu kwezingane ezingama-50% eNingizimu Afrika (isithombe sempilo entsha eyisigidi unyaka nonyaka) zizalelwa ezimweni ezingezinhle futhi ngeke zikuthole ngokwanele lokho ezikudingayo. Ukwandisa lesi sikhathi nokufeza amandla ezinikezwe wona nguNkulunkulu manje, nasesikhathini esizayo sempilo yazo. Lokhu ukungabi nobulungiswa obukhulu.
Ukuze izingane ziphumelele ku-FTD, badinga amathulusi azobasekela ukwakha lapho kukhona umuntu omdala onothandopnobudlelwane obuhle futhi obakhathalele. Lobudlelwane obuhle buyisisekelo nensika yazozonke izito ezodinwa yizingane.
Ukuze imindeni inakekele ngale ndlela, badinga ukuzungezwa umphakathi ukuze baqine, ubasekele futhi ubakhuthaze. Ukuba ngumzali kunzima futhi bonke abazali badinga ukwesekwa, ukukhuthazwa nokuqinisekiswa.
Ibandla liwumphakathi oqoqiwe (njengesigodi sanamuhla) esingaxhuma okufanele lihlangane lisekele imindeni. Kufanele liqinise abazali, libakhe ukuze bakwazi ukuhlinzeka kangcono izingane kulesisigaba esibucayi abakuso.
Siyaqiniseka ukuthi isonto ngalinye lendawo limi ngendlela ehlukile futhi lihlonyiselwe ukwenza umehluko omkhulu emindenini nasekunakekelweni kwezingane zabo.
Umbono omkhulu kaSikunye ngukuthi amasonto akuleli lonke axhumane futhi asekele imindeni, ukuze imindeni ibenekhono lokunakekela izingane, zikwazi nazo ukuthola konke ezikudingayo.
Ukwesekela imindeni yezingane ezinsukwini zabo eziyizinkulungwane zokuqala zokuphila kunembuyiselo echazayo emphakathini wonkana. Eqinisweni, ukutshalwa kwemali kwe- $ 1 kulesi sigaba kuveza u- $ 13 ngokuya kwesikhathi. *
* I-World Health Organisation, i-United Nations Children’s Fund, iWorld Bank Group. Ukukhulisa ukunakekelwa kokukhula kwengane isencane: uhlaka lokusiza izingane zisinde futhi ziphumelele ukuguqula impilo namandla abantu. IGeneva: Inhlangano Yezempilo Yomhlaba Wonke; 2018.